Xog:- Alshabaab oo mamnuucay in badeecado laga soo dejiyo dekada Boosaaso una weeciyay ganacsatada dekada Xamar. – Wararka Khaatumo , Somaliland , Puntland Iyo Somalia
HomeFaalloyinkaXog:- Alshabaab oo mamnuucay in badeecado laga soo dejiyo dekada Boosaaso una weeciyay ganacsatada dekada Xamar.
Xog:- Alshabaab oo mamnuucay in badeecado laga soo dejiyo dekada Boosaaso una weeciyay ganacsatada dekada Xamar.
September 8, 2019 marqaan Faalloyinka, Soomaliya, Wararka maanta 1
Maamulka Gobalka Hiiraan ayaa wada qorshe aay ku fashilinayaan talaabo Dhaq-dhaqaaqa Alshabab aay ku doonayaan in Ganacsatada iyo Gaadiidleeyda Gobalka Hiiraan ku amraan in aay joojiyaan Ganacsiga Degadda Boosaaso oo Ganacsatada Gobalka Hiiraan aay ku xeranyihiin,taasi bedalkeedane aay ku xertaan Dekadda Magaalada Muqdisho.
Illo xog ogaal ah oo maamulka gobalka Hiiraan ka mid ah ayaa ii xaqiijiyay in Alshabab qorshahan aay wadaan uu yimid kaddib markii Ganacsatada Boosaaso iyo Maamulka Puntland aay diideen in Alshabab Canshuur ka siiyaan Dhaqaalaha kasoo xarooda degadda Magaalada boosaaso.
Maamulka Gobalka hiiraan ayaa dhankooda 48-saac ee soo aadan Amar kasoo saari doono qorshaha aay Alshabab wadaan kaasi oo saameyn dhaqaale ku yeelan kara Shacabka iyo maamulka Gobalka Hiiraan.
Ganacsiga Gobalka Hiiraan ayaa xoogiisa ku xeran Dekadda Boosaaso ee Maamulka Puntland.
Ganacsatada Gobalka Hiiraan ayaa Dekadda Boosaaso geeya Xoolo waxaa taasi bedalkeeda aay Boosaaso kasoo qaataan Raashiinka nuucyadiisa kala duwan kuwaasi oo keena Gobalka Hiiraan.
Qaar kamid ah Ganacsatada Gobalka Hiiraan ayaa la sheegay in Alshabab aay ka diideen in aay joojiyaan Ganacsiga Degadda Boosaaso,waxaana lagu balamay kulan kale oo Alshabab iyo Ganacsatada dhaxmara,sida masuuliyiin maamulka Gobalka Hiiraan kamid ah aay ii xaqiijiyeen.
MD Farmaajo oo markii ugu horeysay ka qaybgalaya shirka QM ee kadhacaya USA “Isagoo aan ahayn muwaadin mareekanka”.
1.AL-Shabaab xaruntoodu waa xamar.Ayagaana xamar ku awood sareeya.Ina farmaajo iyo Xassan cali Khayre waxba meesha kuma hayaan.Nimankaasu waxay ka adag yahiin shidaynta maamul gobaleedyda oo shabaab kamaba hadlaan.
2.Haddana waxay ka dhex bilaabatay reer hiiraan iyo Shabaab.Reer Hiiraan waa ku waajib in ay ku shahiidaan shaydaamada raba in ay CUNO qabateeyan caruuahooda iyo xaasaskooda.